Loners invisible - စာမျက်နှာ 41 - ဘလော့စပိန်ယဉ်ကျေးမှု, လူ့အဖွဲ့အစည်း, နိုင်ငံရေးနှင့်အပန်းဖြေ
စပိန်: Review အမြဲတမ်းအကျဉ်းထောင်, အဘယ်သူသည်အသက်တာကိုအခိုင်အမာပြီအရမ်းပျော့
29 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 8
အဘယ်အရာကိုအကောင်းများစွာကိုဘဏ္ဍာရေး shenanigans ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာနှင့် "ခိုးမှု" piecework လျှင်မအသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။ သည် "သေတ္တာ" နှင့်အများကြီး "အများပြည်သူ" ကုမ္ပဏီများ, နိုင်ငံရေးသမားများ၏ရှိရာလက်၌ခံအဆိုပါ depredations [ ... ]
Carl, Soraya ရှိမုန် "အကျင့်ပျက်ခြစားမှု" နှင့်စပိန်။ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများအတွက်အချိန်
27 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 8
ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်မပြုပြင်တစ်ဦးကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ .. "စက်မှု" အကျိုးရှိစွာလိုအပ်သည်။ သူတို့ပျက်ကွက်လျှင်, သူတို့သည်အစားထိုးနေကြပါတယ်လက်ရှိစပိန်, ပြည်နယ်သူ၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက်အလွန်သိသိသာသာဝိသေသလက္ခဏာပြဿနာရှိပါတယ် [ ... ]
အယ်လ် Hoyo က de Friusa အတွက်နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှအိတ်ဖွင့်ပေးစာ
25 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 8
ကံကောင်းထောက်မစွာက "requiem", ဒါပေမယ့် Kely လူးတစ်ဦးမြင့်မားတန်ဖိုးကြီးအီ cancerbera မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုအဘို့ကြီးစွာသောဝမ်းနည်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တဆယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဥရောပ၌သုံးဆယ်ညနေ: ရှစ်သုံးဆယ် [ ... ]
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ: အကြည်လင်ရန်အလွန်နီးကပ်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေလည်း fecal အယ်လ် Hoyo က de Friusa ပေါ်ထွက်လာ
23 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 13
အယ်လ် Hoyo က de Friusa, Bavaro Punta ကာန / ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံမှာ Torera အရှက်ကွဲခြင်း။ တာဝန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြုမူသောအမှုနှင့်အချို့ကိစ္စအပြင်လူအတွက်တုံ့ပြန်ရန်စွမ်းရည်။ ယင်းပါတီများအကြားပြည်နှင်ဒဏ်ပေး sibilino သဘောတူညီချက်, [ ... ]
သံသယဖြစ်ဖွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းများကမေးခွန်းထုတ်သည် "criptomonedas" အစဉ်အမြဲအနိုင်ရ
19 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 3
အင်တာနက်ကိုမဆိုဈေးကွက်ကဏ္ဍများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာနှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအသုံးပြုသွားမည်ပထဝီမဟာဗျူဟာအကျွမ်းကျင်သူများကဦးဆောင်သည် "အဆွေအမျိုးဖွဲ့စည်းလေ့လာမှုများ, တီထွင်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတင်းကုပ်ဆေးကြော" တို့ပါဝင်သည်ရသောအကြားမဟာဗျူဟာများ, ခဲ့ပါသည် [ ... ]
ကမ္ဘာ၏တစ်ဦး Apocalyptic စိတ်ကူးယဉ်သခင်
18 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 3
ကမ္ဘာ၏ Apocalyptic စိတ်ကူးယဉ်သခင်ဟန်ချက်ညီလွှဲဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူဦးရေတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လုပ်သားစျေးကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကြီးမားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုစုပ်ယူနိုင်ဘူး [ ... ]
III ကိုနက်နဲသောအရာထင်ရှား - ကမ္ဘာ၏မြေအောက်ခန်းထဲမှာမေ့လျော့အက္ခရာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခံရဖို့
17 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz 1
နောက်တဖန်သင်တို့ကို။ ငါသည်လည်းပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်, Catalonia အတွက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ရုန်းကန်တစ်ခု incipient မျက်နှာစာ၏အယူအဆအိုး၌သွင်းသော်လည်းသောလနျ့စရာအလှနျအဖြစ်မှန်ထဲကစိတ်ကူးအာရုံနှင့်အတူစွယ်ရိုက် [ ... ]
« 1 ... 40 41 42 ... 52 »
စပိန်သည်မြေဆီလွှာဥရောပအပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်သူ "အခြား" ချမ်းသာကြွယ်ဝဗင်နီဇွဲလား
14 အောက်တိုဘာလ, 2018 0
150 m2 ထက်နေကြသောအိမ်ကပို, စပိန်မှရွှေ့နှင့်ပင်တစ်သန်း-ပေါင်းယူရိုပေးဆောင်စေခြင်းငှါသူ ပို. ပို. ရှိဗင်နီဇွဲလားသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် [ ... ]